ऊर्जामा साढे ४६ अर्ब खर्च «
आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ मा ऊर्जातर्फको कुल बजेट ७५ अर्ब ५३ करोड ४० लाख रहेकोमा ४६ अर्ब ३९ करोड ५२ लाख खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २४ अर्ब ७८ करोड ७५ लाख बजेटमा १४ अर्ब ५ करोड ४० लाख खर्च भएको छ । ऊर्जातर्फ वार्षिक प्रगति ६१. ४२ प्रतिशत र भौतिकतर्फ ७८. ३६ प्रतिशत तथा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ वार्षिक प्रगति वित्तीयतर्फ ५६.७० प्रतिशत र भौतिकतर्फ ७२. ३० प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको तेस्रो चौमासिकसम्ममा भने वित्तीय प्रगति ७३.२६ र भौतिक प्रगति ७५.३ प्रतिशत भएको छ । यस्तै जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयतर्फ सोही अवधिमा भौतिक प्रगति ७१.७९ र वित्तीय प्रगति ७१.६७ प्रतिशत भएको छ ।
भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत गर्ने आयोजनाको संख्या ८ र ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गर्ने आयोजनाको संख्या ११ छ । यस्तै जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत गर्ने आयोजना संख्या १६ र ५० प्रतिशत प्रगति गर्ने आयोजनाको संख्या १३ छ । कुल ३३ मध्ये ४ वटा आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ ।
९० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच
गत आवमा १ सय ४९ मेगावाट जलविद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिएको छ । योसँगै नेपालको कुल जलविद्युत् जडित क्षमता १ हजार ३ सय ९९ मेगावाट पुगेको छ । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित केही ठूला आयोजनाको निर्माण गत आवमै सक्ने लक्ष्य रहेकामा कोभिड–१९ महामारीका कारण त्यसो हुन सकेन । यस्तै गतआवमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढेर २ सय ६० किलोवाट घण्टा पुगेको छ । गतवर्ष थप ३ लाख ३४ हजार घरधुरीमा विद्युत् पहुँच विस्तार भएको हो । योसँगै नेपालमा विद्युत् पहुँच प्राप्त घरधुरी संख्या ५० लाख १० हजार पुगेको छ । मन्त्रालयले थप २ सय ८५ किलोमिटर (सर्किटमा) नयाँ प्रसारणलाइन निर्माणको काम सम्पन्न गरेको छ । योसँगै प्रसारण लाइनको लम्बाइ देशभर कुल ४ हजार २ सय ५१ पुगेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत थप ५० किलोवाट सौर्य वायु ऊर्जा थप भई कुल ८ सय ६६ किलोवाट पुगेको छ । यस्तै वर्षभरिमा थप ५२ वटा थप भई संस्थागत तथा सामुदायिक वायोग्याँसको संख्या ४ सय १९ पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत विद्युत् पहुँच प्राप्त जनसंख्यामा ३ प्रतिशतको वृद्धि भई ९० प्रतिशत पुगेको छ । गत आवमा विद्युत् वितरणका लागि २ सय ९० वटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण भएका छन् । विद्युत् चुहावटमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छ । गत आवमा विद्युत् चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । देशभरका १६ वटा जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ ।
नेपाल सरकारका कुल २३ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय एक्लैले ८ वटा गौरवका आयोजनाको नेतृत्व गर्दै आएको छ ।
विद्युत्तर्फ ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको काममा ९९.७३ प्रतिशत भौतिक र ९८. ६८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । गत आवमा उक्त आयोजनाका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकामा शतप्रतिशत खर्च भएको छ । बाँकी रहेको काममध्ये हालसम्म ६२ वटा (३११ मिटर) माथिल्लो र ७४ वटा तल्लो पेनस्टक साफ (३७३ मिटर) जडान सकिएको छ । कुल २० वटा (१ सय मिटर) होराइजेन्टल पेनस्टक साफमध्ये ५ वटाको जडान भएको छ । यस्तै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी क्षेत्रफलमध्ये ४७ हजार ४ सय ३९ रोपनीको मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न भएको छ । मुआब्जावापत ३३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वितरण भएको छ ।
भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको १२.२ किलोमिटर सुरुङ निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ । यस्तै लकडाउनका समयमा समेत बाँध र विद्युत्गृहको सिभिल निर्माणको काम भइरहेको छ । यस्तै बबई सिँंचाइ आयोजनाको हेडवक्र्सका साथै ७६.२० किलोमिटर मूल र १ सय ९१.३३ किलोमिटर शाखानहर तथा बाढीबाट क्षति भएको थप १७. ९२ किलोमिटर नहरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । रानी, जमरा, कुलरिया सिँंचाइ आयोजनाको इन्टेक तथा फिडर नहर आधुनिकीकरणको काम शतप्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यस्तै मूलनहर निर्माणको काम ९५ प्रतशित, संरचना निर्माण ९० प्रतिशत, हाइड्रोपावर निर्माण ७० प्रतिशत, तथा सिँचित क्षेत्र बचावटको काम ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यस्तै सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको बाँध तथा ४५ किलोमिटर लामो पश्चिम मूलनहर निर्माणको काम सकिएको छ । यस्तै पश्चिम मूलनहरको सिधनियाशाखा सम्पन्न हुने चरणमा छ भने पूर्वी मूलनहर निर्माणको काम करिब ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । उक्त आयोजनाबाट पूर्व र पश्चिम गरी ७ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।
यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत भइसकेको छ । पावर हाउससहित संरचना निर्माणका लागि आवश्यक संरचना निर्माणका लागिजग्गाप्राप्तिको काम सम्पन्नभएको छ । यस्तै सुरुङ निर्माणका लागि लागत अनुमान तथा खरिद कागजात तयार भएको छ । हेडवक्र्स, पावर हाउसलगायत संरचनाको विस्तृत डिजाइनको काम जारी छ ।
थप ५ हजार ५ सय ५९ क्षेत्रफलमा सिँंचाइ
गतआर्थिक वर्षमा थप ५ हजार ५ सय ५९ क्षेत्रफल जमिनमा सतह सिँंचाइमार्फत सिँंचाइ सुविधा पुगेको छ । योसँगै सतह सिँंचाइ हुने कुल जमिनको क्षेत्रफल ९ लाख ९६ हजार ९ सय १७ हेक्टर पुगेको छ । यस्तै विभिन्न ठूला नदीमा ९१ किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । तटबन्धसँगै बाढीका कारण बगरमा परिणत भएको ४ सय ९ हेक्टर जमिन जग्गा उकासमार्फत खेतीयोग्य बनाइएको छ ।
बेरुजु फस्र्योटमा सुधार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँंचाइ मन्त्रालयले बेरुजु फस्र्योटमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ऊर्जातर्फ ९९.९९ प्रतशित र जलस्रोत तथा सिँंचाइ मन्त्रालयतर्फ ९५.५९ प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट भएको हो । ऊर्जातर्फ १ अर्ब ३९ करोड ८२ लाख ८ हजार ५ सय २० रुपैयाँ बेरुजु रहेकामा १ अर्ब ३९ करोड ८० लाख ७ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ बराबरको बेरुजु फस्र्योट भएको छ । यस्तै जलस्रोत तथा सिँंचाइ मन्त्रालयको ९९ लाख ६६ हजार ३ सय ७० बेरुजु रहेकामा ९५ लाख २७ हजार ३ सय रुपैयाँको बेरुजु फस्र्योट भएको छ ।